အမိုက်စားဘော်ဒီလေးကို ဆက်ဆီကျကျလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းကိုခြွေချလိုက်တဲ့ ခင်လွှမ်းရဲ့ ဗီဒီယို – Shwe Myanmar
အမိုက်စားဘော်ဒီလေးကို ဆက်ဆီကျကျလှုပ်ခါပြီး ပုရိသတွေ ရဲ့အသည်းကိုခြွေချလိုက်တဲ့ ခင်လွှမ်းရဲ့ ဗီဒီယို
သရုပ်ဆောင် ခင်လွှမ်းကတော့ ဂစ်တာရှိတ်လေးလို ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကြောင့် အမျိုးသားပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လွှမ်းက အခုဆိုရင် သူမရဲ့ချစ်သူ စည်ဖြိုးနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူ လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီ နှစ်ကိုယ်တူ ဘဝတစ်ခုကို ထူထောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ သူမရဲ့ အလန်းစား
Tiktokလေးတွေဟာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှတရားတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ အလန်းစားကပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မကြာခန ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ အပြတ်ကိုလန်းနေတာကြောင့် ပုရိသတွေကြွေစေမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေရဲ့
ဝန်းရံအားပေးမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့အမြဲလိုလိုမရိုးနိုင်တဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ….ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ခင်လွှမ်းရဲ့. အလန်းစား ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး နဲ့အတူ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။
သရုပျဆောငျ ခငျလှမျးကတော့ ဂဈတာရှိတျလေးလို ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကွောငျ့ အမြိုးသားပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ခငျလှမျးက အခုဆိုရငျ သူမရဲ့ခဈြသူ စညျဖွိုးနဲ့ နှဈဦးသဘောတူ လကျထပျခဲ့ကွပွီ နှဈကိုယျတူ ဘဝတဈခုကို ထူထောငျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိဖဘှေ့တျစာမကျြနှာမှာ သူမရဲ့ အလနျးစား Tiktokလေးတှဟော ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားကာ
ပုရိသတှေ ဝနျးရံနကွေတာလညျးဖွဈပါတယျ။သူမရဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျအလှတရားတှပေျေါလှငျစတေဲ့ အလနျးစားကပွထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မကွာခန ဖျောပွထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိနဲ့ အပွတျကိုလနျးနတောကွောငျ့ ပုရိသတှကွှေစေမှော အမှနျပဲဖွဈပါတယျ။ယောကျြားလေးပရိသတျတှရေဲ့
ဝနျးရံအားပေးမှုအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့သူမကတော့အမွဲလိုလိုမရိုးနိုငျတဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ညို့ယူဖမျးစားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ကဲ….ခဈြပရိသတျကွီးအတှကျ ခငျလှမျးရဲ့. အလနျးစား ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး နဲ့အတူ အလနျးစား ပုံရိပျလေးတှေ ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော…။
Previous PostPrevious သေဆုံးသွားတဲ့အခါ သမီးလေး ကြောက်နေမှာဆိုးလို့ ကျင်းတူးပြီး သွေးရောဂါသည် သမီးလေးနဲ့ အတူဆော့ပေးနေတဲ့ ဖခင်
Next PostNext သွယ် လျှ ပြေ ပြစ် တဲ့ ကိုယ် လုံး လေး ကို လှုပ် ခါ ပြီး ပု ရိ သ တွေ တွေ ရဲ့ အ သည်း ကို ခြွေ ချ လိုက် တဲ့ စု လှိုင် ဝင်း ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို